Maxay shirkado badan oo PCB-ga sameeyaa ay kor ugu qaadaan qiimaha sanadka 2021?
Maxay shirkado badan oo PCB-ga sameeyaa ay kor ugu qaadaan qiimaha sanadka 2021? ——Sababaha qiimaha PCB kor loogu qaaday. Guudmarka: Sannadka 2021, dhaqaalaha adduunka waxaa soo maray dhibaato aan horay loo arag t ...
Awoodda wax soosaarka PCB-da ee caalamiga ah waxay u socotaa dhanka bari
Wax soosaarka tikniyoolajiyadeed ee hore ee Apple ayaa keenay fursado waaweyn oo dib loogu qaabeynayo silsiladda warshadaha PCB. IPhone 8 waxay u badan tahay inay soo bandhigto tikniyoolajiyad cusub sida looxyada xamuulka, sidaasna ay ku fureyso wareeg cusub oo ah wareegga Motherboard-ka. Dib-u-habeynta khadadka alaabada ayaa isku dabooli doona dhabarka ...
Kaisheng waxay qabatay Shirka Alaab-qeybiyeyaasha 2016-guul dhammaystiran
“Wada shaqeynta guul-guuleysiga waa faa’iidada adduunka” waa aasaaska Kaisheng maaraynta silsiladda maareynta. "Wadada adag ee cadawgu waa sida gidaarka birta, laakiin talaabooyin xoog leh, waxaan ku guuleysaneynaa shirkeeda". Munaasabadda ka tagista wixii hore iyo soo dhaweynta cusub ee 2016, waxaan ...
Waxsoosaarka IC shanti bilood ee ugu horreysay 2017 wuxuu kordhay 25.1% sanadkii
Sida laga soo xigtay hawlgalka ee warshadaha elektiroonigga ah soo saarista macluumaadka laga bilaabo Janaayo ilaa May ee 2017 oo ay sii deysay Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada Macluumaadka, soo saarista warshadaha qaybaha elektaroonigga ah ayaa sii waday inay ilaaliso koritaan joogto ah, oo wareeggeedii isku dhafan ...
Waxaan ugu hambalyeynayaa KAISHENG abaalmarinta “AAA Credit Enterprise”
Bishii Juun 21, 2019, qiimeynta amaahda ee SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LIMITED waxaa qiimeeyay AAA Ururka Qiimaynta Shirkadaha Shiinaha.
Falanqaynta muuqaalka tartanka Shiinaha ee warshadaha guddiga wareegga wareegga ee 2016
Waxay la kulantay cadaadis ba'an oo caalami ah iyo isbeddelo farsamo oo deg deg ah, warshadaha guddiga wareega ee Shiinaha ayaa xawaareynaya xawaareheeda si ay ugu dadaalaan heerar sare iyo guulo. Soosaarayaasha guddiga wareegga daabacan waxaa badanaa loo qaybiyaa lix gobol oo ay ku jiraan Shiinaha, Taiwan, Japa ...
5G caqabadaha ku ah teknolojiyadda PCB
Laga soo bilaabo 2010, heerka kobaca ee qiimaha wax soo saarka PCB-da guud ahaan hoos ayuu u dhacay. Dhinac marka laga eego, tiknoolajiyadaha tignoolajiyada cusub ee deg-degga ahi waxay sii wadaan inay saameyn ku yeeshaan awoodda wax soo saarka dhamaadka-hooseeya. Hal iyo laba waji oo mar uun kaalinta koowaad ka galay qiimaha wax soo saarka ayaa si tartiib tartiib ah loogu beddelay pro-dhamaadka sare ...